Defoamer, Mmiri ọrụ, onye nnọchite mmiri - Juyou
Changzhou JuYou Technology Technology ọhụrụ lekwasịrị anya n'ihe polymer ọhụrụ, dị ka silicone na mkpuchi nano ọhụrụ dị iche iche. Ụlọ ọrụ ahụ nwere ndị otu R&D nke ya. Ọnọdụ dị nso na Shanghai, nke dị na Yangtze River Delta Center - Changzhou.
Isi ngwaahịa n'ime ogige ahụ: silicone, silicone emulsions, defoamers silicone, ihe mgbakwunye silicone, roba silicone, ihe silicone na ụdị mkpuchi nano ọhụrụ ọ bụla. A na -eji ngwaahịa eme ihe na mmanụ ala, mmanụ ala, akwa, owuwu, eletriki na elektrọnik, ọrụ ugbo, ụgbọ ala, fotovoltaics na agba na ubi ndị ọzọ.
JY-205 vinyl silicone mmanụ
JY-201 polydimethyl Silicone Mmanụ
JY-916 Silicone Rubber maka Electric Cable Acces ...
ọnụahịa asọmpi na oge nnyefe ngwa ngwa
Ngwa dị ukwuu
Low mmepụta na -eri nnọọ asọmpi price
Ogo dị jụụ